बढी आनन्ददायी यौन क्रियाकलापको उमेर कुन होला ? – Online Bichar
Online Bichar 1st January, 2018, Monday 11:42 PM
उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ ?
महिलाहरुको हकमा २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्स सबैभन्दा आनन्ददायक हुने निश्कर्ष निकालेको छ । यसैगरि पुरुषको हकमा भने सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा वा आनन्द लिने उमेर ३३ वर्ष रहेको बताइएको छ ।
उमेर सँगै यौन क्रियाकलापमा अर्थात रोमान्चकता र आनन्ददायक अनुभवमा असर पर्ने हुन्छ । उमेर अनुसार कुन उमेरमा अथवा कुन उमेर समुहमा मानिसको यौन सक्षमता बढी हुन्छ भन्ने कौतुहल हुनु स्वभाविक नै हो । एक यौन खेलौना उत्पादक कम्पनीले अनलाइन मार्फत अध्ययन गर्दै कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी रोमाञ्चक र आनन्ददायक हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरि पुरुषहरुको हकमा भने ३३ बर्षको उमेरमा सेक्स गर्दा बढी सक्रिय तथा आनन्द महसुस हुने सो अध्ययनले देखाएको छ । पुरुष औषतमा १८ वर्षको उमेरमा उनीहरुको भर्जि्िनटी तोडिने सोहि अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनले उमेर अनुसार सेक्समा पाइने आनन्दको आंकडा निकाले पनि दुबैको चाहाना र आवस्यकतालाई विचार पुर्याई गरिने सेक्स नै बढी आनन्ददायी हुने गर्दछ ।–एजेन्सी